Ibrahimovic oo kala doortay kooxda ugu cad cad ee guuleysan karta kulanka Manchester United iyo PSG – Gool FM
(Champ’ League) 12 Feb 2019. Halyeeyga reer Sweden ee Zlatan Ibrahimovic ayaa aaminsan in Paris Saint-Germain ay tahay kooxda ugu cad cad ee ka soo tilaabi karta Manchester United si ay ugu gudubto wareega xiga ee tartanka Champions League.
Kooxda ka dhisan caasimada France ee Paris Saint-Germain ayaa caawa marti ku noqon doonta garoonka Old Trafford, si ay kula ciyaarto Manchester United lugta hore wareega 16-ka ee tartanka Champions League.
Ibrahimovic ayaa soo xirnaa maaliyada kooxda PSG mudo 4 xili ciyaareed ah, kahor inta uusan kaga dhqaaqin Manchester United, wuxuuna ku sugnaa garoonka Old Trafford mudo 2 xili ciyaareed ah, laacibka reer Sweden ayaa xiriir wanaagsan la leh labada kooxoodba.
Dhinaca kale Sweden ayaa tilmaamay in uu si weyn ula dhacsan yahay qaab ciyaareedka kooxda Manchester United tan iyo markii uu kooxda yimid tababare Ole Gunnar Solskjær kaasoo 11 kulan uu hogaamiyay guuldaro la’aan ah, wuxuuna guul gaaray 10 kulan iyo 1 barbaro ah.
Hadaba Ibrahimovic ayaa wareysi uu ku bixiyay shabakad “Fox Sport” wuxuu kaga hadlay kulanka caawa ay wada ciyaari doonaan labada kooxood Manchester United iyo PSG.
“Paris Saint-Germain waxay la ciyaari doontaa kooxda waqtigan, waxaa lag filan karaa wax walba”.
“Hadii aad i weydiiso waqti ka hor, waxaan dhihi lahaa anigoo aaaan ka fekerin, Paris Saint-Germain waa kooxda ugu cad cad ee guuleysan karta”.
Barcelona oo la ogaaday inay deymo fara badan ku jirto isla markaana soo amaahatay 140 milyan oo Euro!